China High Power Mmanụ - Free Silent Air Compressor emepụta na suppliers |ZERLION
The moto na-anabata 100% ọla kọpa isi eriri igwe iji hụ na compressor iji nweta ike dị elu, arụmọrụ dị elu, obere ume ike, arụmọrụ dị elu na ntụkwasị obi dị elu.
Ejiri ihe nchebe gburugburu ebe obibi ọhụrụ nwere mgbanaka piston nwere obere esemokwu na mmanye onwe ya.
Mgbanaka cylinder na-anabata teknụzụ siri ike elu elu, nke na-ebelata oke ọkpụrụkpụ ma na-eme ka mbufe ọkụ dị ngwa;Ọ nwere ike melite kọmpat n'ụzọ dị irè ma na-eyi nguzogide nke elu, belata ọnụọgụ esemokwu ma gbatịa ndụ ọrụ.
Obere nha, dị mfe iburu.
Ọ dị mfe idowe, obere akụkụ iyi.
1. The moto na-anabata 100% ọla kọpa isi mkpuchi iji hụ na compressor iji nweta ike dị elu, arụmọrụ dị elu, obere ume ike, arụmọrụ dị elu na ntụkwasị obi dị elu.
2. Ihe mgbanaka piston bụ ihe nchebe gburugburu ebe obibi ọhụrụ na-enwe obere esemokwu esemokwu na mmanye onwe ya.
3. The cylinder mgbanaka na-anabata elu elu hardening technology, nke ukwuu na-ebelata ọkpụrụkpụ ma na-eme ka okpomọkụ nyefe;Ọ nwere ike melite kọmpat n'ụzọ dị irè ma na-eyi nguzogide nke elu, belata ọnụọgụ esemokwu ma gbatịa ndụ ọrụ.
4. The oriri na iyuzucha valves ịmụta mba elu nkà na ụzụ na ezi uche mkpochapụ imewe, nke mere na olu arụmọrụ na-ukwuu mma na mkpọtụ bụ doro anya ala karịa ndị ọzọ yiri ngwaahịa.
5. Nhazi zuru oke na-echebara echiche, na-agbanwe agbanwe, dị mfe iji rụọ ọrụ ma dị mma iji nọgide na-enwe.
Oge ikike: (belụsọ mmebi nke ọdachi mmadụ mere ma ọ bụ nke sitere n'okike kpatara),Akwụkwọ ikike otu afọ maka igwe dum (ma ewezuga akụkụ mmezi)
1. Nlekọta mbụ nke Jin zhilun screw air compressor bụ awa 500; Ndochi mmanụ, lattice mmanụ na ihe nzacha ikuku (akwụ ụgwọ)
2. Nlekọta oge niile kwa awa 3000 (akwụ ụgwọ); Mgbanwe ọ bụla: mmanụ, grid mmanụ, nzacha ikuku, mmanụ na gas separator.
3. N'ihi na Jin Zhilun mmanụ bụ mmanụ sịntetik, ọ nwere ogologo oge mgbanwe mgbanwe mmanụ na nchebe dị mma nke ngwá ọrụ. (N'otu ụzọ ahụ na mmanụ ụgbọ ala)
4. A naghị ekpuchi nsogbu ịdị mma ngwaahịa nke nrụzi oge gafere ma ọ bụ iji ihe ndozi na-abụghị nke mbụ
Nke gara aga: Ọhụrụ High Power Belt Driven Air Compressor
Osote: Mmanụ ọhụrụ dị elu - Compressor Silent Air Compressor efu
160Kw mmanụ ikuku Compressor efu
Ngwuputa ikuku Compressor
Mmanụ n'efu ikuku Compressor
Igwe nrụnye ikuku skid maka ọrịre
Mgbanwe ọsọ ikuku Compressor
Piston Ikuku Compressor jikọrọ aka dị elu
Mmanụ ọhụrụ dị elu - Compressor Silent Air Compressor efu
Igwe Igwe Ọdụdọ Igwe Ọdụdọ Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe isi ke Na-adighi Ogbe Ogbe Ogbe Ogbe Ogbenye Ikuku
Ọhụrụ obere ike Direct ebugharị Portable Air Compre...